RW soomaaliya Cabdi weli sheekh Axmed oo maanta ku wajahan magaalada Baydhabo Janaay. – idalenews.com
RW soomaaliya Cabdi weli sheekh Axmed oo maanta ku wajahan magaalada Baydhabo Janaay.
Wararka naga soo gaaraya magaalada baydhabo ayaa waxaa ay sheegeyaan in maalinta beri ah uu gaari doono raysulwasaare Cabdiweli Sheikh Axmed Iyo wefdi uu hogaamineyo.
Baydhabo ayaa waxaa la sheegeya in dadka magaaladaasi ay isku diyaarineyaan soo dhoweynta Raysulsalwasaare Cabdiweli iyo wefdigiisa.
Safarka raysulwasaaraha soomaaliya ayaa lagu micneynaya sidii ay ugu hortagi lahaayeen doorashada la fileyo inay maalinta isniinta ka dhacdo magaalada baydhabo ee xaruunta gobolka baay.
Doorashada ka dhacayso magaalada baydhabo ayaa ah mid dowlad goboleed looga dhisayo gobolo lex ah ayadoona dowlada si xoogan ugu soo horjeedo in maamul loo sameeyo halkaasi.
Dowlada soomaaliya ayaa dhowr jeer isku deysay inay hor istaagto doorashayada ka dhici rabto magaalada baydhabo iyadoona dowlada wajiyo badan u adeegsatey baajinta doorashada iyadoona dowlada lagu eedeyneya inay ka dambeyso shirka bakiin oo la sheegey in lagu dhisayo maamul sedax gobol ah.
Golaha guurtiga koonfurgalbeed ee soomaaliya ayaa ka go`an inay dhisaan maamul ka kooban lix gobol oo kala ah Shabeelaha Hoose, Gedo, Bay, Jubba Hoose, Jubba Dhexe iyo Bakool.
Safarka raysulwasaaraha oo ah markiisa ugu horeysay ee uu gaaro tan iyo intii la doortey ayaa waxaa la ogeyn inay wax ka bedeleyso mooqufkii adkaa ee golaha guutida koonfur-galbeed soomaaliya.
Dadka reer baydhabo ayaa loogu bartey wefdi walbo ee gaaro baydhabo ama siyaasad walbo inay marka hore si wanaagsan ay u soo dhoweeyaan ka dibna ay la horfadhiistaan mooqifkooda ku aadan siyaasada iyo rabitaankooda.
Baydhabo oo marti gelineysa shirka maamul u sameynta koonfurgalbeed ee soomaaliya ayaa waxaa soo martey wajiyo fara badan oo dadka siyaasadaha wata ku soo dhoweysa ugu dambeyntiina ay kursiga la gediso.
Daawo:Wiil Dhalinyaro Hubeesan oo watay Magacyada Wariyaal la qorsheeyay in la dilo oo la qabtay.
Beesha Murusade oo Kalsoonidii Kala Noqotay Dowlada Soomaaliya,Maxay tahay sababtu?